Gear Low: izici nokusebenza
Ukudluliswa okunciphisayo kuvumela i-SUV ukuba ithole ikhono eligcwele lokuwela izwe kanye nekhono lokunqoba izithiyo ezingaphezu kwamandla omunye umshini. Uma ivuliwe, amasondo ajikeleza ngejubane eliphansi, kuyilapho injini ingashintshi.
Igesi elinciphile libhekisela kwento yokudlulisela futhi efakwe kwikhompyutha yokudlulisa. Kulo injini i-torque idluliselwa emigodini yamabhuloho ahamba phambili emoto.
Amandla agcwele injini atholakala ngenani elibekiwe lezinguquko, ngalesi sikhathi, ngokudluliselwa, i-torque idluliselwa emasondo okushayela. Iyunithi ngayinye inejubane layo, eholela torque enkulu.
Uma i-downshift iyadingeka
Idivaysi yokudlulisa okujwayelekile ihlukana nokudluliswa kwamandla wenjini ngendlela efanayo nokuhamba ngendlela ehlukile. Isibonelo, ungaqala ukuhamba kwegeyimu yokuqala ngesivinini esiphezulu kunokungenzi lutho, futhi ekuphindiseni kwezinkulungwane eziningana kanye negiya lesihlanu ukusheshisa ngesivinini esikhulu. Amandla amakhulu aqala kakhulu kulokhu okulandelayo. Ngokuphenduka okunjalo ekudlulisweni kokuqala ukuhamba ngeke kwenzeke, futhi amandla ngisho angafinyeleli amanani ajwayelekile. Kanti akunakwenzeka ukugibela isithiyo esiphezulu: amasondo angawa esitokisini, kanye ne-injini - stall. Kunesimo esifanayo ngesikhathi ushayela ngeqhwa, udaka nezinye izimo ezinzima. Kwezinye izimo, ngokwesibonelo, ekunqobeni imigwaqo eqhamuka emgwaqweni, kuyadingeka inkambo eqaphele futhi engathandeki enezikhukhula.
Ezimweni ezinjalo, ukudluliswa okunciphisa kuyasiza kakhulu. It has a high gear ratio, okwenza kube lula ukunciphisa isivinini samasondo futhi ngesikhathi esifanayo ukuthola amandla angaphezulu. Izici ezinjalo zinikeza inzuzo ebalulekile uma kukhwela umthamo onobukhulu obukhulu, ngaphandle komgwaqo nezinye izimo eziyinkimbinkimbi.
I-SUV enokunciphisa nokukhishwa okunciphile ingaba nebhokisi le-gear othomathikhi noma ngebhodi lebhodi lezincwadi. Akuzona zonke izimoto, ikakhulukazi ezintsha, enenguqulo ejwayelekile nebhokisi elihlukanisayo elihlukile. Uma engekho, igesi elincishisiwe liyashintsha ngokusebenzisa izinkinobho noma i-lever ekhethekile.
Izimoto eziningi eziphakeme kakhulu ezingekho emgwaqeni azikho ibhokisi lokusabalalisa ngenxa yokuthi landisa izindleko zemoto nesisindo sayo. Ayinayo ezinye izinketho ze-jeep ukuthola ikhambi eliphumelelayo kunawo wonke. Ngezinye izikhathi ibhokisi elinjalo lingekho kumamodeli amadala. Isibonelo singenziwa ngu-LUAZ - ukushayela kwamasondo angaphambili kuyona yokushayela, ukuxhumana kwangemuva kungenzeka ngebhokisi legiya. Kodwa emotweni elincishisiwe imoto iqhubekela phambili, okuba yinto engathandeki kakhulu ezimweni ezithile.
Uma i gear encishisiwe ingaguquki, kufanele unciphise imoto, kodwa kungcono ukuxhuma ngaphambi kokuthi i-traffic iqale. Uma i-clutch igxiliwe endaweni efunayo, i-lever ehambelana iboniswa. Izimoto ezintsha zingashintshwa ngekhompyutha nge inkinobho ekhethekile.
Uma usebenzisa gear enjalo, awukwazi ukuhambisa phezu kwenkimbinkimbi, ngoba ukudluliselwa kuyoba nomthwalo obalulekile ngaleso sikhathi. Ukuze ufeze umphumela omkhulu, udinga ukuhamba ngesivinini esengeziwe. Kubalulekile ukulandela isibhamu. Naphezu kokuthi kunciphisa umthwalo kuwo izikhathi eziningana, kungenzeka, ngokungenalwazi, ukulimaza ngokuhlahlela okubukhali, ngemuva kokuba injini ifinyelele isivinini sayo esiphezulu.
I-downshift inenombolo ethile. Ngokunyuka kwalo, imoto iqala ukuhamba kahle, kungakhathaliseki ukuthi ijubane lihamba kanjani.
"Kauryur" (i-snowmobile): impendulo yomnikazi, imininingwane yezobuchwepheshe, isithombe
I-Cadillac (i-Jeep) - i-American SUV ekhangayo
I-SUV engcono kakhulu yeRussia. Ama-SUV aphansi kunawo wonke eRussia
INkantolo YaseYurophu Yamalungelo Abantu: umqashi Ungafunda abasebenzi siqu okuthunyelwe
Alexander Galimov: Biography futhi umndeni hockey
Indlela ukupheka ophaya ethosiwe ukuba imvubelo inhlama: zokupheka ngezithombe
Master-class "Indlela ukudweba amazambane"
Bangobani - zonke lokudutshulwa emlandweni we NHL?
ULyudmila Andreevna Privivkova: impumelelo kanye biography yezemidlalo
Swift - ezulwini al eqamba amaphiko awo sezulu efudumele
"Aistenok" (powder): ukhethe esihle!
"Spareks" imithi. Yokusetshenziswa